लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उन्डुबेली (जिम्बावे) एफिक एस्टोनियन ओरोमो काजाक किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्षोसा ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली डच डेनिश तामिल तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुगान्डा लुभेल वारे-वारे शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
“अगाडिबाट तीव्र गतिमा आइरहेको ट्रेनको नजिकै उभिएँ। आङै सिरिङ्‌ङ भयो, एकछिन त सबै समस्याबाट मुक्त भएँ जस्तो लाग्यो।”—लियोन *
“अग्लो चट्टानबाट पानीमा डाइभ हान्दा एकछिन त अर्कै दुनियाँमा पुगें जस्तो लाग्यो। त्यसो गर्न प्रायः रमाइलो लाग्थ्यो तर कहिलेकाहीं भने डर लाग्थ्यो।”—लारिसा
लियोन र लारिसाजस्तै थुप्रै युवा मनोरञ्जनको लागि खतरा मोल्न मन पराउँछन्‌। तिनीहरू आफू कतिसम्म गर्न सक्छु भनेर जाँच्न जस्तोसुकै जोखिम उठाउन पनि तयार हुन्छन्‌। के तपाईंलाई पनि जोखिमपूर्ण खेल वा मनोरञ्जनमा भाग लिऊँ-लिऊँ जस्तो लाग्छ? त्यसो हो भने यस लेखले तपाईंलाई मदत गर्नेछ।
मनोरञ्जनको लागि खतरा मोल्ने बानी नै बस्न सक्छ। त्यसो गर्न केही समय रोमाञ्चक हुन्छ होला तर तपाईंलाई फेरि अर्को जोखिम उठाउन मन लाग्छ। मार्को पनि लियोनजस्तै ट्रेन ओहोरदोहोर गर्ने सुरुङभित्र गएका थिए। तिनी भन्छन्‌: “त्यस्तो खतरा मोल्नु भनेको उम्कनै नसक्ने पासोमा पर्नु जस्तै हो। केही समय त रमाइलो हुन्छ तर त्यसपछि फेरि अर्को जोखिमपूर्ण काम गर्न मन लाग्छ।”
रोडमा गुडिरहेको गाडीलाई समात्दै स्केटिङ गरेका जस्टिन भन्छन्‌: “एकदम मज्जा आयो। मलाई फेरि गरौं-गरौं जस्तो लाग्यो। मानिसहरूले मेरो वाहवाही गरेको चाहन्थें तर अन्तमा हस्पिटल पुगें।”
साथीहरूको दबाबले गर्दा सुद्धीबुद्धि गुम्न सक्छ। बाइस वर्षीय मार्भिन भन्छन्‌: “साथीहरूले मलाई यसो भन्दै अग्लो बिल्डिङमा चढ्‌न लगाए, ‘जाऊ, जाऊ, तिमी गर्न सक्छौ।’ धेरै खतरा थियो। डरले खुट्टा काँपिरहेको थियो।” लारिसा भन्छिन्‌: साथीहरूले जे गरे मैले पनि त्यही गरें।”
केहीले इन्टरनेटमा खतरा मोल्नेहरूको प्रशंसा गर्छन्‌ अनि त्यस्तो जोखिम उठाउनुमा कुनै खतरा छैन भन्ने भान पार्न खोज्छन्‌। हुन पनि त्यस्ता जोखिमपूर्ण खेलहरूको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ हुन्छन्‌ अनि त्यस्ता खेल खेल्नेहरूको चर्चा चुलिंदै जान्छ।
उदाहरणको लागि, केही भिडियोमा मानिसहरू जोखिम मोल्दै पर्खाल, घर र भऱ्याङहरूमा दौडेको, चढेको वा नाघेको देखाइन्छ। यस्तो भिडियो हेर्दा तपाईं दुई वटा गलत निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ: (१) त्यसमा त्यत्ति खतरा छैन, अनि (२) सबैले गरिरहेका छन्‌। यसको नतिजा: तपाईं मनोरञ्जनको लागि आफ्नो जीवनै खतरामा पार्न पनि पछि हट्‌नुहुन्न।
आफ्नो क्षमता जाँच्ने अरू राम्रा र सुरक्षित तरिकाहरू छन्‌। बाइबल भन्छ, “शारीरिक तालिमबाट केही फाइदा त हुन्छ।” (१ तिमोथी ४:८) तर “यस वर्तमान युगमा सुझबुझ चलाउन” पनि बाइबलले सल्लाह दिन्छ। (तीतस २:१२) कसरी त्यसो गर्न सक्छौं?
कस्ता जोखिम छन्‌ विचार गर्नुहोस्। बाइबल भन्छ: “प्रत्येक समझदार मानिस आफ्नो ज्ञानद्वारा काम गर्छ। तर मूर्खले आफ्नो मूर्खताको तमाशा देखाउँछ।” (हितोपदेश १३:१६, NRV) कुनै गतिविधिमा भाग लिनुअघि त्यसमा कस्ता जोखिम वा खतरा छन्‌ थाह पाउनुहोस्। आफैलाई सोध्नुहोस्, ‘के यो गतिविधिमा भाग लिंदा मेरो जीवनै जोखिममा पर्छ वा कुनै गम्भीर चोटपटक लाग्ने अवस्था छ कि?’—बाइबलको सिद्धान्त: हितोपदेश १४:१५.
जीवनको आदर गर्ने साथीहरू छान्नुहोस्। साँचो साथीले तपाईंलाई कहिल्यै पनि जोखिमपूर्ण काम वा अप्ठेरो लाग्ने कुरा गर्न प्रोत्साहन दिंदैन। लारिसा भन्छिन्‌: “राम्रा साथीहरूले मलाई सही किसिमको मनोरञ्जन छान्न मदत गरे। तिनीहरूसँग सङ्‌गत गर्न थालेपछि म पनि परिवर्तन भएँ।”—बाइबलको सिद्धान्त: हितोपदेश १३:२०.
आफैलाई सोध्नुहोस्, ‘के यो गतिविधिमा भाग लिंदा मेरो जीवनै जोखिममा पर्छ वा कुनै गम्भीर चोटपटक लाग्ने अवस्था छ कि?’
कुनै जोखिम नमोली आफ्नो क्षमताबाट आनन्द उठाउनुहोस्। हुर्कंदै जाँदा “आफूले कतिसम्म गर्न सक्छु त्यसको सीमा तोक्न सिक्नु” आवश्यक छ भनेर एउटा किताबले * बताउँछ। होसियारी अपनाउँदै हामी आफ्नो क्षमता जाँच्न सक्छौं।
उचित किसिमको आत्म-सम्मान विकास गर्नुहोस्। जीवनका चुनौतीहरू सफलतापूर्वक पार गर्दा मानिसहरूले तपाईंको आदर गर्नेछन्‌, खतरा मोलेर कुनै मनोरञ्जनमा भाग लिंदा होइन। लारिसा भन्छिन्‌: “अग्लो चट्टानबाट पानीमा डाइभ हान्ने खेल सुरुवात मात्र थियो, पछि अरू थुप्रै जोखिमपूर्ण मनोरञ्जनमा भाग लिएँ। मैले पहिल्यै ‘नाँइ’ भन्न सिकेको भए राम्रो हुन्थ्यो।”
निष्कर्ष: जोखिमपूर्ण मनोरञ्जनमा भाग लिएर अनावश्यक खतरा मोल्नु भन्दा मनोरञ्जन छान्ने सन्दर्भमा बुद्धिमानी छनौट गर्नुहोस्।—बाइबलको सिद्धान्त: हितोपदेश १५:२४.
^ अनु. 17 Adolescent Risk Behaviors
“समझदार मानिसले आफ्ना पाइलाहरू सतर्कसाथ चाल्छ।”—हितोपदेश १४:१५, NRV.
“बुद्धिमानीहरूको सङ्‌गत गर्नाले बुद्धिमान्‌ होइन्छ।”—हितोपदेश १३:२०.
“बुद्धिमान्‌ मानिसहरूका निम्ति जीवनको बाटो उँभोतिर जान्छ, र तल पातालदेखि परै राख्छ।”—हितोपदेश १५:२४.
“जोखिमपूर्ण मनोरञ्जनमा भाग लिंदा रमाइलो होला तर कस्ता खतरा छन्‌ त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। जवानी मै कसलाई पो ‘ह्विल चियरमा’ बस्न मन पर्छ र!”
“यदि साथीहरूले तपाईंलाई मन नपर्ने कुनै गतिविधिमा भाग लिन लागेका छन्‌ भने उनीहरूको पछि नलाग्नु नै बेस हुन्छ। उनीहरूसँगै जानुभयो भने साथीहरूको दबाबको सिकार हुनुहुनेछ।”
शेयर गर्ने शेयर गर्ने मनोरञ्जनको लागि खतरा मोल्नु उचित हो?